Kubonakala sengathi wonke umuntu omdala angakwazi ukulinganisa izinga lokushisa komzimba. Amadivayisi anamuhla akwazi ukusebenzisa ngisho nezingane. Kodwa bambalwa kakhulu abantu abazi ukuthi le nqubo ine-algorithm ethile. Isilinganiso sokushisa komzimba kufanele senziwe ngokucabangela zonke izici zomzimba nesimo sesiguli. Into ebalulekile kuyoba imvelo kanye nohlobo lwedivayisi.
Yiziphi izenzo i-algorithm edingayo? Ukushisa komzimba kulinganiswa nge-thermometer. Izindawo ezithandwa kakhulu futhi ezingabizi ziyimishini yama-mercury. Ukuhlelwa kwesenzo nabo kuzoba kanje: shake, setha, thola izinga, thuthumela futhi ususe.
Eminyakeni yamuva, amadivaysi kagesi asetshenziswe kabanzi. Ziphephile, zibiza kakhulu futhi zinembile kakhulu. Ukuze usebenzise lokhu, udinga ukuvula idivayisi, thatha isilinganiso bese ulinda isignali yomsindo, ulinde eminye imizuzwana embalwa, uhlole umphumela bese uwuvala.
Amamitha angasebenzi abuye athengiswe. Zibiza kakhulu futhi azivami ukuthengwa iziguli. Noma kunjalo, amadivayisi anjalo alula kakhulu ukusebenzisa. I-ray evela emitha iqondiswa endaweni ethize yomzimba, futhi emva kwengqikithi yemizuzwana ubona umphumela. Futhi kunezingcezu ezilahlayo zokulinganisa ukushisa. Bahlanganiswe ebunzini. Ama-thermometer-nipples adalwe izingane. Cabanga nge-algorithm yesinyathelo ngezinyathelo (ukushisa komzimba okulinganisa ngezindlela ezahlukene).
Wonke umuntu uye wajwayele ukujwayela ukushisa kwama-armpits. Kubonakala sengathi kungaba lula: Ngabeka i-thermometer, ngilinganisisa umphumela futhi, uma kunesidingo, ngithatha i-antipyretic. Kodwa kuvela, akuyona yonke into elula kakhulu. Kukhona i-algorithm ethile yokulinganisa izinga lokushisa komzimba ku-armpit.
Shake i-thermometer ukuze izinga le-mercury lingaphansi kwe-36.
Sula isikhumba ngendwangu yotshwala noma ugeze ngamanzi. Lokhu kufanele kwenziwe ukuze ukukhuphuka kwe-evaporation kungabonakali i-mercury noma i-electronic tip.
Faka idivayisi ku-armpit, ukuze umbhobho wedivaysi ufakwe endaweni ejulile kakhulu. Cindezela ngokuqinile isandla sakho. Kubalulekile ukuthi i-thermometer ayifuni ezembatho. Umoya akufanele ungene esikhala sendawo.
Uma ukulinganisa kwenziwa nge-thermometer ye-mercury, khona-ke uphumula emaminithini angu-6 kuya kwangu-10. Idivayisi ye-elekthronikhi izokhipha isignali ekuqaleni, kodwa ulinde u-0.5-1 amaminithi wokuhlola okulungile komphumela.
Susa ithuluzi bese ufunda ukufundwa. I-thermometer ye-mercury kufanele ikhanyiswe ngemuva kokulinganisa. Uma ukufundwa kwezinga lokushisa kuphakeme futhi kulesi simo futhi kuzohlala kugcinwa, idivayisi izokuhluleka maduzane.
I-Algorithm: isilinganiso sokushisa komzimba emlonyeni
Enye indlela yokuthola izinga lomzimba wakho ukukala ukufundwa ngomlomo. Ngoba lezi thermometers ze-mercury nezinye ze-elektroniki zifanelekile. Kuhlobo lokugcina lwedivayisi kufanele kube uphawu olubonisa ukuphikiswa kwalo umswakama.
I-algorithm yesenzo iyoba kanje.
Dedisa imitha. I-thermometer ye-mercury iyazanyazanyiswa, futhi i-elekthronikhi ivuliwe. Qinisekisa ukuthi lesi samuva asikwazi ukuvuza umswakama.
Yima phambi kwesibuko, vula umlomo wakho uphakamise ulimi lwakho.
Beka iphuzu lwedivayisi ngakwesobunxele noma kwesokudla indawo ye-hyoid. Vala umlomo wakho.
Kuzothatha imizuzu engaba ngu-10 ukulinda kuze kube yilapho i-mercury instrument ithola ukusebenza komzimba wakho. Idivayisi ye-elekthronikhi izokala ngaphambi, kodwa emva kwalokho akufanele uyikhiphile ngomunye umzuzu.
Susa idivaysi, thatha ukufunda bese uyisula ngokusula i-disinfectant. Isinyathelo sokugcina siyadingeka ukuqinisekisa ukuthi azikho ama-microbes kanye nama-virus asele ku-thermometer.
I-Algorithm yokulinganisa ukushisa komzimba ezinganeni
Kulezi ziguli ezincane, kukhiqizwa amadivaysi akhethekile okuvumela ukuba uthole ngokushesha izinkomba. Yiqiniso, ungasebenzisa ama-thermometers ajwayelekile: i-mercury ne-electronic. Kodwa lokhu akunjalo ngaso sonke isikhathi, ngoba ingane ingakwazi ukuhlala endaweni eyodwa. Iyini i-algorithm? Ukukala kokushisa komzimba kungenziwa ngezindlela ezilandelayo.
Ukusetshenziswa kwama-thermometers-nipples. Abakhiqizi abaningi bakhiqiza i-thermometers efanayo. Idivaysi inesimo se-nipple evamile, udinga nje ukuyinikeza ingane. Emaminithini ambalwa uzothola umphumela, ozoboniswa ekubonisweni. Ukukala kokushisa kuleli cala kwenziwa ngomlomo. Ngakho-ke, ngaphambi kokusebenzisa idivaysi futhi ngemva kokuyicima, yiphilise ngokuvumelana nemiyalelo.
Ama-strips-thermometers. Lawa madivayisi ayatholakala. Zithengiswa ngezicucu eziningana ephaketheni. Kungcono ukukala ukushisa komntwana olele ngale ndlela. Mane nje unamathisele umdwebo ebunzini. Phambi kokusula isikhumba ngokuthuthumela kanye nothuli. Uzothola umphumela kumaminithi angu-2-3.
Amadivaysi angaphutha. Lawa madivayisi asebenza kude namamentimitha amaningana emzimbeni. Ingane ngeke kudingeke ihlale futhi ilinde kuze kube yilapho izinga le-thermometer "ligijima". Kwanele ukuqondisa igosi ebunzini lomntwana bese ulungisa umphumela. Ukusebenzisa amadivayisi we-infrared, ungakwazi ukukala izinga lokushisa endlebeni yengane. Ngemuva kokusetshenziswa ungakhohlwa ukuvala idivayisi.
Kukhona enye i-algorithm yokulinganisa ukushisa komzimba wesiguli - isisekelo. I-Mercury noma i- thermometer ye-elektroniki isetshenziselwa lolu cwaningo . Kubalulekile ukuthi ukuxilongwa kwenziwa ekuseni. Ngaphambi kokufunda, awukwazi ukuphuma embhedeni. Uma usuvuka, faka idivaysi ye-1-2 centimitha ku-rectum. Susa idivayisi ngemuva kwemizuzu engu-4-5. Qinisekisa ukuthi ugeze futhi uphilise i-thermometer. Khumbula ukuthi imiphumela etholakalayo izoba ngaphezulu kunezo ozitholile usebenzisa isilinganiselo emgqeni.
Ngokwesibonelo, ezibhedlela zokubeletha kukhona inqubo ekhethekile yokulinganisa ukushisa komzimba. I-algorithm iqala ukubeka i-thermometer endaweni yesigqoko se-elbow. Ukuxhaphazwa kwenziwa ukuze kuhlolwe isimo somama ekubelethweni. Ukulinganisa izinga lokushisa emgodini ngesikhathi esifanayo kunika imiphumela evulekile (ngenxa ye-lactation). I-algorithm yesenzo ihilela ukubeka i-thermometer endaweni yesikhombisa, ulinde imizuzu engu-7-10 bese ususa izinkomba.
Usuvele ukwazi ukukala ukushisa komzimba. I-Algorithm, izenzo kanye nemibandela kuhanjiswe. Udinga futhi ukwazi ngeminye imithetho esebenza kuzo zonke izindlela ezichazwe ngenhla.
Ngesikhathi sokulinganisa udinga ukuphumula: ungakhulumi, ungagijimi.
Kubalulekile ukuqhuba isifundo kabili ngosuku (ngesikhathi esisodwa).
Ukushisa okumaphakathi kufanele kube phakathi kwama-degrees angu-18 kuya kwangu-23.
Ukulinganisa emva kokudla, ingane ekhala, ukucindezeleka, ngesikhathi sokuya esikhathini nokukhulelwa, inganikeza imiphumela ehlungiwe.
Landela i-algorithm ebonisiwe futhi ulinganise izinga lokushisa ngokufanele. Inhlanhla kuwe nemiphumela emihle!